1. Hatomboka amin’i Natalie Portman ity lisitra ity. Ankoatra ny fiteny anglisy izay misosa fotsiny ho azy dia miteny hebreo ihany koa izy. Mahafehy ny fiteny alemana, espanola ary japoney ary mianatra miteny frantsay, efa taona vitsy izay.
2. Mirotsaka any anaty asa sosialy maro i Colin Firth fa miezaka ihany koa amin’ny fiainany manokana. Nianatra niteny italiana izy, ho an’ny vadiny, Livia Giuggioli.
3. Efa tena mahafehy ny fiteny italiana i Christoph Waltz ary nanehoany izany ilay horonan-tsary Inglourious Basterds niarahany tamin’i Brad Pitt. Ankoatra io fahaizany ny fiteny italiana io dia misosa fotsiny ny fahaizany ny fiteny alemana, anglisy sy frantsay.
4. Efa artista manokana mihitsy i Viggo Mortensen fa ambonin’izany mbola mahafehy fiteny maro ihany koa izy. Lehibe tao anatin’ny fiteny anglisy izy, ny espanola sy ny danois izay fitenin-dReniny. Tsy nijanona teo nefa fa tany anaty fanodinana tany dia nianatra niteny rosiana, frantsay, suédois sy alemana izy. Nianatra nifehy ny teny arabo alzeriana ihany koa azy, tao anatin’ny 6 volana monja.
5. Dia lasan’i Audrey Hepburn ny amboara amin’ity fahafehezana teny maro ity. Voasafidy ho mpilalao sarimihetsika amerikanina mendrika indrindra fahatelo izy tany amin’ny taona 1999. Lehibe tao anatin’ny fiteny anglisy ity mpilalao sarimihetsika ity. Nianatra ny teny « néerlandais » izy tao anatin’ny fahatanorany. Betsaka ny sedra niainy fa tsy nanakana azy tsy hianatra fiteny hafa izany, izay efa isan’ny zavatra nankafiziny rahateo. Taty aoriana izany dia nahay niteny flamand, espanola, frantsay sy italiana izy, ankoatra ny fiteny anglisy sy néeralandais.